भदौ १७ गते
शनिबार अनामनगरस्थित आफ्नै कार्यलयमा भेटिएका चलचित्र ‘रामकहानी’का निर्देशक सुदर्शन थापा, नायिका तथा निर्मात्री पूजा शर्मा र नायक आकाश श्रेष्ठ चलचित्र चल्नेमा ढुक्क देखिए ।
स‌ंचारकर्मीसङ्ग कुराकानीका क्रममा उनीहरुले चलचित्रको निर्माण गर्दाका विभिन्न किस्सा समेत सुनाए । नायिका पूजा शर्मालाई सुरुवातमा सुदर्शनले नाम सुनाउँदा ‘रामकहानी’ खासै मन परेको रहेनछ । तर, उनलाई ‘प्रेमगीत, म यस्तो गीत गाउँछु’मा पनि यस्तै भएको रहेछ । तर, अहिले यही नाम नै चर्चामा आएपछि पूजा खुशी छिन् ।
निर्देशक सुदर्शन थापा भने चलचित्रको नाम भन्दा पनि पहिले आफूले कथावस्तु तयार पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्-‘यो नेपालको पौराणिक कथामा आधारित रहेर तयार पारिएको चलचित्र हो । चलचित्रको कथावस्तु नै रामको वरिपरी घुम्ने भएकाले रामकहानी राखेका हौँ ।’
नायक आकाश श्रेष्ठ कम बोल्छन् । उनले चलचित्रको अफर आएपछिको एउटा रमाइलो किस्सा सुनाए । आकाशले भने-‘जतिबेला यो चलचित्रको कथा मेरो हातमा पर्‍यो र मैले पढ्न थाले, निकै रमाइलो लागिरहेको थियो । तर, क्लाइमेक्सतिर पुग्दा त चलचित्रको कथा पुरै घुमेको रहेछ । म त पढ्दा पढ्दै तर्सिएँ । त्यसपछि पढ्नै सकिनँ र दिदीको कोठामा गएर सुतेको थिएँ ।’
चलचित्र चल्नेमा किन विश्वस्त छ त यो टिम ? निर्देशक थापा भन्छन्-‘दर्शकलाई हाम्रो टिममाथि विश्वास छ । त्यसमाथि केदार घिमिरे, जितु नेपाल लगायतका कलाकारले आफ्नो टिम छाडेर यसै यो चलचित्र गर्न राजी पनि हुनु भएन होला ? चलचित्रमा खास केही भएर उहाँहरु आउनु भएको होला भन्ने दर्शकले पनि वुझ्नु भएको छ । दर्शकले सवा २ घन्टा मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ ।’
निर्मात्री तथा नायिका पूजा शर्मालाई डर लागेको छैन, बरु उनी विश्वस्त छिन् । चलचित्रको हरेक पाटो सशक्त भएकाले पनि चल्नेमा उनी ढुक्क देखिइन् ।
भदौ २२ गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो चलचित्रलाई लिएर सबैभन्दा ढुक्क नायक आकाश श्रेष्ठ देखिए । उनले भने-‘मलाई दर्शकले लभ स्टोरी चलचित्रमा रुचाउनु भएको छ । यो चलचित्र हेरेपछि दर्शकको माया अझै बढ्नेछ ।’
निर्देशक सुदर्शन थापा आकाशको स्वभाव र चलचित्रमा उनको भूमिका मिलेकोले पनि यसपछि आकाशको डिमाण्ड चलचित्र क्षेत्रमा ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् ।
सुदर्शनले आफूले निर्देशन गरेका चलचित्रमध्ये उत्कृष्ट ३ भित्र ‘रामकहानी’ पर्ने दाबी समेत गरे ।